China Car Type Wireless Charger CW14 စက်ရုံနှင့် တင်သွင်းသူများ |Lantaisi
1. အနည်းငယ်သတိထား၍ကြည့်ရသော ကြိုးမဲ့အားသွင်းကိရိယာကို အသုံးပြုလိုပါက သံလိုက်တပ်ထားသော ဖုန်းအားသွင်းကိရိယာသည် ကောင်းသောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။Lantaisi CW14 Wireless ကို လေဝင်ပေါက်၊ CD အပေါက် နှင့် ဒက်ရှ်ဘုတ် ကားအထိုင် ဗားရှင်းများဖြင့် ရနိုင်ပါသည်။အားသွင်းကိရိယာကို လေဝင်ပေါက်တွင် လုံခြုံစွာ ချိတ်ထားပေးသည့် လေဝင်ပေါက်ကလစ်တွင် လော့ခ်ချသည့် ယန္တရားပါသည့် လေဝင်လေထွက်ဗားရှင်းကို ကျွန်တော် စမ်းသုံးကြည့်လိုက်သည်။
2. သင့်ကြိုးမဲ့ဖုန်းသည် သံလိုက်ကားပေါ်တွင် တပ်ဆင်ရန်အတွက်၊ ၎င်းတွင်ထည့်သွင်းထားသောသတ္တုအချို့ပါသည့် case တစ်ခု လိုအပ်သည် သို့မဟုတ် ပါ၀င်သောပါးလွှာသော stick-on သတ္တုပြားများထဲမှ တစ်ခုကို သင့်ဖုန်း၏နောက်ဘက်တွင် ချိတ်နိုင်သည်။ (၎င်းကိုအောက်ခြေတွင်ကပ်ထားသောကြောင့်၎င်းသည်၎င်း၏အလယ်ရှိကြိုးမဲ့အားသွင်းပတ်လမ်းကိုအနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေပါ။)ပန်းကန်ပြားကို သင့်ဖုန်းကာဗာဖြင့်ပင် ဖုံးအုပ်နိုင်သော်လည်း ကာဗာသည် အလွန်အထူမဟုတ်ပါက သို့မဟုတ် သင့်ဖုန်းအား အားသွင်းအပေါက်တွင် ကပ်နေမည်မဟုတ်ကြောင်း သေချာပါစေ။
3. Lantaisi CW14 သံလိုက်ကြိုးမဲ့ကားအားသွင်းကိရိယာ တပ်ဆင်တွင် အမြန်အားသွင်းနိုင်စွမ်းရှိသည့် USB-C ကေဘယ်တစ်ခု ပါဝင်သည်။ကျွန်ုပ်၏ iPhone 12 သည် အားသွင်းကြိုးပေါ်တွင် လုံခြုံစွာရှိနေသော်လည်း iPhone 12 Pro Max နှင့် iPhone 13 ကဲ့သို့သော ပိုကြီးသောဖုန်းများသည် အထက်ဖော်ပြပါ ကြိုးမဲ့အားသွင်းစနစ်ရွေးချယ်စရာများထဲမှ တစ်ခုကို အသုံးပြုရန် ပိုကောင်းပေမည်။
4. သင်မှာယူရန်အတွက် အဖြူရောင်၊ အနက်ရောင်နှင့် စိတ်ကြိုက်အရောင်များကဲ့သို့ မတူညီသောအရောင်များရှိပါသည်။ပြီးတော့ ဒီအမျိုးအစားက တကယ့်ကို လူကြိုက်များပြီး ရိုးရှင်းပြေပြစ်ပါတယ်။
ယခင်- သံလိုက်အမျိုးအစား ကြိုးမဲ့အားသွင်းကိရိယာ MW04
နောက်တစ်ခု: Magsafing Wireless Car Charger 15W Qi Fast Car Mount Phone Holder Magnetic Air Vent 360 Rotation တွဲသုံးနိုင်သည်